UkuThengiswa kweMibhobho eQhelekileyo yokuHamba okuPhezulu kwiBhodi yePCB
Uvavanyo -Induction Kuthengiswa ngemibhobho yeCopper kwiBhodi yePCB
Izixhobo: I-DW-UHF-6KW-I Handheld InductionWindows
ixesha: Sekunde ezi-15.
Isisombululo sethu sokufudumeza ngaphakathi sincede umthengi ukusika ixesha lokuvelisa nelalithathe iyure eli-1 ukuvelisa imibhobho yokufudumeza yobhedu eli-16.
The DW-UHF-6KW-Ndaphatha ukuhambisa umbane ngesandla kunye nesikhululo sobushushu esenze ngempumelelo inkqubo yokuthengisa kwimizuzwana eli-15. Sikwasebenzise enye yeendlela zethu zokwenziwa ezenziwe senziwe ngonxweme ezihambisa isamente ukuqinisekisa ukuba ikhoyili ayizukufumana monakalo.
Ukwenza uvavanyo, simise imibhobho yobhedu yoqheliso kwiipads ezimbini ezifakwayo ezinomgangatho wobushushu ophantsi. Ukutshisa ukutshisa iqinisekisa ukuphindaphinda ngokupheleleyo. Kukho ukuncipha okukhulu kwixesha lomjikelo kunye nokunyuka kokusebenza ngoku njengoko iinxalenye ezininzi zingathengiswa ngaxeshanye.
iindidi Teknoloji tags inkqubo ephezulu yokuthengisa, ukutyunjwa kweetyhubhu yethusi, umshini wokucoca, indibano ethengiswa yeBPB yebhodi, Inkqubo yokuthengisa yokuthengisa, i-soldering, zethusi, imibhobho yobhedu ye-soldering, ukuthengisa ubhedu kwiPCB, ukuthengiswa kobhedu kwibhodi yePCB Post yokukhangela
I-Suctionering I-Taines zensimbi engenasiseko kwi-Brass Base